Nezvedu - eGay Shop
Egay yakasikwa chete kubva pakuziva kwedu kuti munhu wese akasiyana, anokosha, mumwe wemhando. Takaziva kuti taida kubatsira vanhu vakawanda kuwana uye kuratidzira avo vakasiyana uye kuratidzira nyika kuti ivo vanokosha zvakadini.
Kambani yedu inogara muFrance. Tinoshanda nevatengesi munyika yose uye matura edu ezvimwe zvinhu ari kuAsia. Chinangwa chedu ndechokusarudza zvakanakisisa mhando michina inosangana nemitemo yedu yehutano uye mararamiro asi ichiramba ichigoneka. Zvinhu zvakasarudzwa zvakagadzirirwa kukubvumira kuratidza unhu hwako kana uine hupenyu hwakareba.
Tinoda kukuunzira mufaro apo iwe unofara, unoda, unofamba kana unoshanda. Uye isu tiri pano kuti tikubatsire kuratidza unhu hwako hunozvikudzawo! Ndicho chikonzero chekuunganidza kwedu kunopa zvipfeko zvemashumbani uye zvigadzirwa zvinoshamisa. Zvinhu zvedu zvakare zvinoshanda uye zvakadzidziswa kukupa iwe huwandu hwemufaro kuburikidza nazvo. Isu takaita semi! Uye isu tinoda kuti iwe ugogoverana zviroto zvako uye rako realzations nesu.
Zvechokwadi, basa redu raizova pasina, dai rakanga risisiri revatengi vedu vanoshamisa. Ichi ndechikonzero nei tichigara tichipa zvakanakisisa uye shamwari yepamusoro yevatsigiri, kana iwe uine mibvunzo kana nenyaya nemirairo yako. Ichokwadi, hatigoni kuva bhizimusi remhuri asi isu tinoshingayra kubata vatengi vedu semhuri, nekuda kwekuti vakakodzera!
Zvatinowana zviri pano kuti tiratidzire kuti zvinotyisa uye zvakasiyana sei iwe.
Saka tenderera mudura redu uye tora chigadzirwa kana zviviri zvaunoda ...
Inguva yekuzvibata iwe! Ndinokutendai pakusarudza isu!